Ijoollee - BBC News Afaan Oromoo
Lammiin Afrikaa Kibbaa tokko daa'ima ganna torbaa mana fincaniitti gudeeduun himatame
Mucayyoon ganna torbaa kun maatii waliin mana nyaataa deemuun lafa tapha daa'immaniif qophaa'e keessa turte.
Gurbaan umrii waggaa 19, michuu isaa waliin tapha 'Call of Duty' jedhamu wayita taphatan qoosaaf jedhee poolisiitti bilbile.
Tafiidaa Raqiib: Hiree daa'ima dhibamtee kan murteessu maatii moo doktoraa?
Dhimma daa'ima ganna 5 Tafiidaa Rakiib irratti maatii fi doktoroonni mana murtii wal dhaaban.
8 Fuulbaana 2019
Dubartiin Hindii ganna 73 durba lakkuu deesse
Harmeen kun jireenya ishee guutuu daa'ima hawwaa kan turte ta'us hanga ammaatti ulfaa'uu dhabdee akka turte dubbatti.
Dubartiin Ameerikaa daa'ima korojoo keessa dhoksitee Filippiinsiiti ba'uf yaalte himatamte
Buufata xiyyaaraa Manilaatti kan qabamte dubartiin ganna 43 kun daa'ima erga dhalatee guyyaa ja'aa ture korojoo keessa dhoksitee turte jedhame.
Bukkurruu: Tiyaatirri ijoollee Afaan Oromoon qophaa'e eebbifame
Tiyaatirri ijoollee Afaan Oromoon qophaa'e 'Bukkurruu' jedhamu giddugala Aadaa Oromootti eebbifame.
Sirna Gadaa keessatti hunduu gahee fi itti gaafatamummaa ofii akkuma qabu, ijoolleenis sadarkaa Sirna Gadaa keessatti itti gaafatamamummaan qaban alatti ayyaanas qofaatti kabajatan qabu. Isaan keessaa Ukee, Taaboreefi Buheen muraasadha.
Ijoolleen hiriyoota bira geenyaan addunyaa hunda dagatu. Utaalaafi gammadaa waan olaniif gara manaatti yoo deebbi'an nama biraa fakkachu malu. Haatii tokkos mudannoo ishee nuuf qoodde jirti dubbifadhaa.
Amma MP haasaa taasisutti, af-yaa'iin mucaa xuxxoo hoosisan
Paartlaamaa Niiwzlaand keessatti miseensi Parlaamaa kan ta'e abbaan mucaa hanga haasaa taasisutti af-yaa'iichi mucaa harkaa fudhuun baatee xuuxxoo hosiisuu. Kunis jira addunyaarra.
Dhiirota sadii Somaaliyaatti daa'ima gudeedan irratti duuni murtaa'e
Kaaba Baha Somaaliyaatti dhiirotni sadii daa'ima ganna 12 gudeedani fi ajjeesan du'aan adabaman.
Shamarreen waggaa 21, garaan dhukkubnaan mana fincaanii bakka dhaxeetti of walaaltee mana yaalaatti ofi barte tokko, mucaa deesse ajjeefte jedhamuun hidhaan waggaa 40 itti murtaa'e ture, booda bilisa baate.
Poolisiin Naayijeeriyaa dubartii magaalaa jiddugala daldalaa kan taate Leegositti mucaa saroota waliin godoo keessatti itti cufuun vidiiyoo waraabaa itti qoosaa turte to'annaa jala oolche.
Magaalaa xiqqo Kibba Polaanditti waggoota dheeraan asitti dhiirri dhalachuu diduun yaaddoo uumeera.
Keeniyaatti miseensi mana maree daa'ima qabattee paarlaamaa seente ari'amte
Maqaankoo Amaarach Riichimand jedhama. Umuriin kiyya waggaa 20. Kanan jiraadhu Norzi Kerolaayinaa yoo ta'u kanan dhaladhe Walayitaa Soodootti.
Li Yaansiyaa: Dubartiin Chaayinaa daa'imman 118 kunuunsitu hidhamte
Yeroo tokko akka gootaatti kan faarfamaa turte Li Yaansiyaa, ammammoo maqaa guddisa daa'immaniitiin maallaqa waliin dhooftee nyaatteetti jedhamuun yakkamteetti.
Appilikeeshiniin daa'imman ganna 13 gadii qofti fayyadaman 'Messenger Kids' jedhamu mudaan irratti argameera jedhe 'Facebook'.
Bara 2018, Raashiyaa keessatti haadholiin 33 da'immaan isaani ajjesuun mana murtiitti dhiyaataniiru. Ogeessoti lakkoofsi yakka kanaa dachaa 8 ta'uu danda'a jedhu.
Indiyaa keessatti erga qabxiin qorumsaa gadi dhiifamee barattoonni hedduun of ajjeesaniiru, rakkoo mudateef sababi dogoggora qormaata soroorsuu irratti mudateedhas jedhameera.